Kolombia dia firenena mamirapiratra miaraka amin'ny loko manokana izay tsy mety misaratsaraka na tsy hadino. Noho ny toetrany any amin'ny faritra, i Kolombia dia lasa firenena tsara ho an'ny fialam-boly, satria misy valan-javaboary maro, tendrombohitra, volkano , ary faritra roa mahafinaritra - ny Ranomasina Karaiba sy ny Pasifika.
Kolombia dia firenena mamirapiratra miaraka amin'ny loko manokana izay tsy mety misaratsaraka na tsy hadino. Noho ny toetrany any amin'ny faritra, i Kolombia dia lasa firenena tsara ho an'ny fialam-boly, satria misy valan-javaboary maro, tendrombohitra, volkano , ary faritra roa mahafinaritra - ny Ranomasina Karaiba sy ny Pasifika. Ny fitsangatsanganana ao Kolombia dia mety ho lasa sariaka mahafinaritra sy mahavariana, ny sary izay mety hahafinaritra handinihana ny takarivan'ny ririnina.
Rahoviana no fotoana tsara indrindra handehanana any Kolombia?
Tsara ny manamarika fa tsy miova ny hafanana isan-taona any Kolombia. Afaka miditra amin'ny fotoana isan-taona ianao ary mankafy fialantsasatra mahafinaritra, satria tsy mangatsiaka loatra ny ririnina eto (11 ° C ny farany ambany indrindra).
Ny haavon'ny rano ao Karaiba mandritra ny taona dia miakatra avy ao amin'ny +20 ... +26 ° C. Ny morontsirak'i Pasifika dia somary miovaova kokoa: miovaova ny mari-pahaizan'ny rano any amin'ny ranomasina 18 ka hatramin'ny 266 dolara.
Ny fotoan'ny orana ao Kolombia dia ny fotoan'ny Septambra hatramin'ny Desambra. Na izany aza anefa dia tokony ho tsaroana fa any amin'ny faritra sasany dia latsaka anaty volana hafa ny oram-batravatra. Ohatra, ny faritra atsinanan'ny firenena sy ny morontsirak'i Pasifika dia tena orana. Noho izany, tena matevina izy io, ary tsy mahazatra ny tsy fahampian'ny fahavoazan'ny rivotra toy izany ao anatin'io toetrandro io.
Ny faritra hafa ao Kolombia dia somary mena. Ny fotoana hatramin'ny desambra ka hatramin'ny tapatapaky ny Aprily dia matetika tsy mandeha orana be. Amin'ny ankapobeny, ity no fotoana tsara indrindra ho an'ny dia.
Fialan-tsasatra any Colombia
Araka ny efa voalaza tetsy aloha, i Kolombia dia manana faritra roa, ary ny tsirairay amin'izy ireo dia manintona amin'ny fomba manokana ho an'ny mpizaha tany:
Ny morontsirak'i Pasifika dia manana toetr'andro milamina ary malaza koa ny flora sy ny biby tsara tarehy. Ny hafanana anaty rano any an-dranomasina dia mahafinaritra mandritra ny taona manontolo ary mety tsara mba hilomano. Ny vatoharan-dranomasina sy ireo mpandeha an-dranomasina tsy mahazatra dia manintona mpitsoka mpilomano. Tsara homarihina fa ny morontsirak'i Pasifika dia manavaka ny tondra-drano mahery vaika, ny rivotra ary ny arabe. Tokony hotsaboina amim-pitandremana ny toeram-pambolena, ary tsara kokoa ny manolotra ny tolotra amin'ny hotely.
Ny morontsiraky ny Ranomasina Karaiba dia milamina kokoa, manana toetrandro milamina sy tsy milamina izy. Eto no misy ireo toerana tahaka an'i Santa Marta , Cartagena , San Andres ary Providencia . Izy ireo dia manavaka ny fasika matevina manify. Ny ranomasina Karaiba dia tena tsara ho an'ny manidina, satria manana harena voajanahary mahagaga. Ohatra, mahaliana ny fitsangantsanganana an'i Santa Marta - eto dia mahita ny vatohara ho an'ny vatohara sy ny sambo mpandidy. Ny fialan-tsasatra any Kolombia ao Cartagena dia mety ho samihafa amin'ny fitsangantsanganana kely mankany amin'ny nosy Mukura, izay heverina ho nosy iray misy ny torapasika tsara indrindra ao amin'ny distrika. Ankoatra izany, io nosy io dia tahaka ny nofinofin'ny paradisa tropikaly, ary ny toetrany dia mety tsara ho an'ny foto-drafitr'izy ireo.
Fialam-boly voajanahary ao Colombia
Kolombia dia malaza amin'ny valan-tseranana nasionaly marobe, azo atao ny mandehandeha manomboka amin'ny maraina ka hatramin'ny alina, ary tsy mahita ny zana-ketsa rehetra misy azy.
Tsy lavitra ny tanànan'ny spa ao Santa Marta no valam-pirenena ao Sierra Nevada de Santa Marta. Avy eto an-dàlana mankany amin'ny làlana dia afaka mankany amin'ny tanàna very ianao - tranainy indianina tranainy tany am-piandohan'ny taonjato XX.
Ao akaikin'i Santa Marta ihany koa ny tahirin-drivotra - toerana tsy manam-paharoa sy mahafinaritra. Any 35 km miala an'i Santa Marta no misy ny Valam-pirenena Tayrona .
Iray amin'ireo manan-karena indrindra ny valan-javaboary akaikin'ny renivohitra Kolombiana - Bogota . Antsoina hoe Sierra Macarena , ary 640 000 hektara io faritra io. Amin'ny ankapobeny dia ala maoderin'ny faritra Andeana.
Ao amin'ny valan- tseran'ny nosy Los Nevados dia misy ny tendron -tendrombohitra, eo afovoany ny volokano rakotra lanezy. Io toerana io ao Kolombia dia tena tsara ho an'ireo tia an-kalamanjana sy fanatanjahan-tena.
Ny faritra Amazon dia antsasaky ny faritra voaaro. Anatin'ireo valam-pirenena ao amin'io faritra io, dia manamarika manokana ny Katios , Amakayaku , Ararakuar ary ny toeram-piarovana El Tuparro. Any akaikin'ny tanànan'i Montenegro dia misy ny Park National de Coffee - toerana iray izay azo antoka hitsidihana ireo mpankafy kafe.
Famaranana tao Kolombia
Ho an'ireo mpankafy ny fizahan-tany an-tanàn-dehibe, Colombia koa dia mety tsara, satria ny faritra an-tanandehibe eto amin'ity firenena ity dia tena manintona sy mahaliana. Ao amin'ny trano-tsambo Kolombiana, misy endrika samihafa mifampiankina, maro ireo tranom-bakoka mahaliana sy làlam-be taloha, ary ny vato tsirairay dia manainga ny tantara.
Mazava ho azy fa mendrika ny hitsidika ny renivohitry ny firenena - Bogotá . Eto ianao dia afaka mitsidika an'i Bolivar Square sy Casa de Nariño , toeram-ponenan'ny filoham-pirenena. Mahaliana koa ny National Museum of Colombia sy ny Golden Museum .
Mendrika ny mason-tsika ary Bucaramanga , izay antsoina koa hoe Tanànan'ny Park, satria ao amin'ny faritaniny dia maherin'ny 160 ny zaridaina amin'ny kianja! Tena mampiavaka ny tontolo an-tanan-dehibe sy ara-boajanahary.
Popayan dia tanàna noforonina tamin'ny taonjato faha-16 ary iray amin'ireo ohatra tsara indrindra niaina tamin'ny taonjato faha-kolonialy. Manana fiangonana maro mahafinaritra izy ary mahaliana ihany koa ny Museum of Colonial Art.
Kali no tanàna fahatelo lehibe indrindra any Kolombia. Eto dia afaka mahita ny Plaza de Toros de Canabaralejo, izay misy balaonina nentim-paharazana.
Leticia dia tanàna kely eo amin'ny sisintany miaraka amin'i Brezila sy Però . Any akaikin'ny Amazonia no misy azy, ary ny renirano lehibe indrindra dia ny Monkey Island, izay misy olona an'arivony tapitrisa isan-karazany.
Ny loza ateraky ny fizahan-tany any Kolombia
Ho tonga eto amin'ity firenena ity, tokony hieritreritra ny sasantsasany amin'ireo loza mety hitranga mandritra ny diany ianao ary hikarakara ny fiarovana anao. Ohatra, ny toetr'andro dia tsy mahazatra amin'ny Eoropeana, ary noho izany dia ilaina ny fanaovana vakansy satria noho ny fiovaovan'ny toetrandro dia mahatsapa adin-tsaina ny vatana, ary mora ny mitroka virosy. Tokony hikarakara ny hoditrao koa ianao, satria mafana ny masoandro any Kolombia mandritra ny fotoam-pialan-tsasatra, ary afaka mandoro mora foana ianao, na dia tsy mahita izany aza.
Ary, mazava ho azy, tokony handehandeha amim-pitandremana akaikin'ny haran-dranomasina ianao, satria maranitra be izy ireo ary afaka manapaka ny tenanao. Tsara kokoa ny tsy hilomano ao anaty fihenam-bidy raha tsy misy fitifirana na, farafaharatsiny, tsy misy paingotra manokana.
Lima - fitsangatsanganana
Hamburger ao an-trano
Sean Penn: tsy fahombiazan'ny literatiora voalohany sy ny ratra amam-pitiavana taloha
Ahoana no hampihenana ny asan'ny tsinay amin'ny alàlan'ny fihenam-bidy?
Voa maina miaraka amin'ny saosisy amin'ny multifariate
Fanamaivanana ny havokavoka
Root Celery - Fitomboana sy Fikarakarana
Efitrano fandraisam-bahiny miaraka amina garazy
Fikajiana fingotra maoderina 2015
Kalina mena - toetra mahasoa sy fanoherana
Fanosihosena ho an'ny zaza vao teraka
Fitaovana tsotra ho an'ny charlottes amin'ny paoma - hevi-dehibe ho an'ny fanaovana sakafo matsiro
Asidra eo amin'ny hozatra
Fanomezana ny vadiny amin'ny fitsingerenan'ny fampakaram-bady
Linoleum ho an'ny laminasa
Ny maso mitranga Tsipromed
Hemorrhoids - asa
Ny fanomezam-pahasoavana voalohany nofonosina tamin'ny tananao
Tranok'alan'akanjo maoderina - Autumn 2014